China Dental ifektri kanye nabaphakeli | Isi-Donghua
Ngokumelana nokushisa okuphezulu, amandla amakhulu omthelela, i-anti-fog kanye nezinga eliphakeme lokucaca kwe-crystal, ishidi le-DHUA polycarbonate liyindlela enhle yokuvikela izihlangu zobuso bamazinyo nezibuko zamazinyo.
• Isihlangu sobuso bamazinyo
Ngokumelana nokushisa okuphezulu, amandla amakhulu omthelela, i-anti-fog kanye nezinga eliphakeme lokucaca kwe-crystal, i-DHUA polycarbonat sheeting iyindlela enhle yokuvikela izihlangu zobuso bamazinyo. Futhi ukumakwa kwesibuko sePolycarbonate kunikeza indawo ebonakalayo yesibuko sokuhlola, izibuko zokushefa / zeshawa, izibuko zezimonyo nezamazinyo ukukhulisa ukubonakala.
Isibuko samazinyo / somlomo
Isibuko samazinyo, noma somlomo yisibuko esincane, esijwayelekile esiyindilinga, esiphathekayo nesibambo. Ivumela udokotela ukuthi ahlole ingaphakathi lomlomo nohlangothi olungemuva lwamazinyo.
Isihlangu sobuso bamazinyo
UDhua unikela ngesihlangu sobuso esenziwe nge-PET ecace bha noma ishidi le-polycarbonate elinokumbozwa kwenkungu ezinhlangothini zombili. Singakwazi ukusika esimweni sakho esidingekayo. Lezi zivikelo zobuso zingasetshenziswa njengesihlangu sobuso bamazinyo ukugwema ukusaphazeka, izimpukane nokunye ukungcola ngesikhathi sokuxilonga.